Nokia 6.1 Plus သည် Android Pie ကိုရရှိသည်။ အတည်ပြုပြီးသောအခြားကိရိယာများ Androidsis
အသုံးပြုသူများအတွက်သတင်းကောင်း Nokia က 6.1 Plus အား: Android 9.0 Pie Update! ၎င်းကိုမကြာသေးမီကကုမ္ပဏီ၏အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Juho Sarvikas ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ သူကပုံမှန်အားဖြင့်သူဆက်သွယ်လေ့ရှိပြီးတက်ကြွနေသည့်လူမှုကွန်ယက်မှတဆင့်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
မနေ့က HMD Global သည် Nokia9အတွက် Android 6.1 Pie ၏တည်ငြိမ်သော update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဤဆောင်ပါး။ ယနေ့သူကကြေညာခဲ့သည် ဒီအလယ်အလတ်တန်းစား terminal အတွက် update ကို update လုပ်နေပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်း update သည်အခြားထုတ်ကုန်များသို့လည်းရောက်ရှိမည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
အထူးသဖြင့် Juho Sarvikaas သည်ဖင်လန်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်သော HMD Global ၏ကုန်ပစ္စည်းဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ Android Pie Update သည်အရွယ်အစားမှာ ၁၃၄၉.၅ MB ဖြစ်ပြီး၊ စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များစွာပါရှိသည်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အသစ်လို၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဘက္ထရီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တောက်ပမှု။ ၎င်း update သည် Nokia 6.1 Plus အတွက်အောက်တိုဘာလလုံခြုံရေး patch အပြင် system တည်ငြိမ်မှုနှင့်သေးငယ်သော bug fixes နှင့်အခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပါထည့်သွင်းထားသည်။
နောက်တစ်နေ့။ နောက်ထပ် update တစ်ခု Nokia 6.1 Plus သည် Android9Pie ကိုအသုံးပြုထားသည် #Nokiamobile #AndroidOne ? pic.twitter.com/Spls0myFbA
- Juho Sarvikas (@sarvikas) အောက်တိုဘာလ 31, 2018
Nokia အမှုဆောင်၏ကတိကို အခြေခံ၍၊ Android Pie ကိုရရှိမည့် Nokia 8 နှင့် Nokia 8 Sirocco တို့ဖြစ်သည်၎င်းသည်ယခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် (သို့) ရက်အနည်းငယ်သာစောင့်ဆိုင်းရန်လိုသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ထွက်ရှိမည့် Nokia 3, Nokia5နှင့် Nokia6တို့ကိုလည်း Android Pie ရရှိမည်ဟုလည်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
3 ၏ Nokia 5, 6, 8 နှင့် 2017 ကိုလည်းရရှိမည်လား။ ဒါကအရာရာတိုင်းဟာတစ်ချိန်တည်းမှာဘာလို့မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် https://t.co/k6GWhHFTMM
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ Nokia 6.1 Plus ကိုယခုနှစ်တွင် Notch ဖြင့်ပထမဆုံး Nokia ဖုန်းအဖြစ်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် ၅.၈ လက်မ FullHD + မျက်နှာပြင်ရှိပြီး Snapdragon 5.8 ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားသည်။ ၎င်း၏ကျောဘက်တွင် 636 နှင့် 16 MP ကင်မရာ dual setup တစ်ခုနှင့်5MP ရှေ့ကင်မရာရှိသည်။ ၎င်းတွင်နောက်ဘက်တပ်ထားသောလက်ဗွေစကင်နာနှင့် ၃,၀၆၀ mAh စွမ်းရည်ဘက်ထရီလည်းပါရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Android Pie ကို Nokia 6.1 Plus အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Nokia 3,5နှင့်6သည်နောက်ပိုင်းတွင်လက်ခံရရှိရန်အတည်ပြုခဲ့သည်